Sida loo sameeyo boodhadhka: Maxay yihiin iyo waxyaabaha ugu muhiimsan | Hal-abuurka Online
Sida loo sameeyo boodhadhka
Xigasho: Farxad Yar
Hubaal, dhammaanteen mar ka mid ah nolosheenna, waxaan haysanay hal ama in ka badan boodhadh daboolay derbiyo badan oo qolalkeenna ah.
Qoraalkan kaliya ma rabno inaad mar kale ku xirto iyaga, laakiin sidoo kale waxaan rabnaa inaad ogaato saldhigyada ugu muhiimsan ee boodhku ka kooban yahay. Tani suurtogal ma noqon doonto iyada oo aan la helin wax yar oo taariikhi ah si loo ogaado horumarkeeda, iyo dabcan, waxaan ku siin doonaa gacanta ugu horeysa, ugu fiican. talo ama talo si aad u bilowdo naqshadaynta dhammaan waxaad rabto.
Haddii aanaan ku qancin weli, waxaanu kugu martiqaadaynaa inaad sii waddo oo aad nala joogto wax yar.
1.1 Qodobbada muhiimka ah
1.1.1 Fiiro gaar ah
1.2 Noocyada boodhadhka
1.2.2 Xog badan
2 Boodhka: Dulucda Taariikhiga ah
3 Apps loogu talagalay abuurista boodhadhka
3.3 Abuurista ArcSoft Daabacaadda
3.5 Qoraa Genius
3.7 Naqshadeynta Affinity
3.8 Ronya Soft Booster
Waxaa ka mid ah qeexitaanno badan oo jira, waxaan dhihi karnaa in boodhku yahay wax aan ka badnayn nooc ka mid ah kartel, kaas oo la og yahay in la dhigo gudaha ama dibadda deegaanka. Boodhka waxaa inta badan lagu muujiyaa ujeedada in loo sameeyo qurxin ahaan, ama iyadoo la doonayo in la muujiyo waxa ugu muhiimsan.
Boodhadhku waa shay ka soocan dadweynaha qaan-gaarka ah. Xagjirnimada kale ee sida caadiga ah lagu muujiyo boodhadhka ayaa ah midda ay shakhsiyaadka qaarkood u haystaan ​​qaar ka mid ah noocyada ugu horreeya ee qaybtooda: cabitaannada, sigaarka, baabuurta, mootooyinka, iyo kuwa kale, sidaas darteed, calaamadahooda waxaa badanaa lagu wareejiyaa boodhadh ay taageerayaashani si ballaaran u helaan.
Boodhadhku waxay ka samaysan yihiin qalab ay ka mid yihiin kartoon ama warqad iyo habka ugu caansan uguna fudud ee lagu hagaajin karo derbiyada waa iyada oo loo marayo cajalado dhejis ah oo ku yaal cidhifyada, ama sidoo kale waxaa suurtagal ah in laga soo laadlaado cidiyaha yaryar. Marka laga hadlayo waxa ku jira, waxa ay yeelan karaan oo kaliya sawir, sawir ama waxa kale oo ay ku dari karaan walxaha kale ee isgaadhsiinta sida garaafyada iyo qoraalada.
Boodhka had iyo jeer wuxuu ka kooban yahay dhowr walxood oo wada jira, midaysan oo sameeya hal fariin ama fariimo badan. Laakiin kuwa ugu muhiimsan waa:
Waxa jira qaacido yar oo buuxinaysa baahida dadweynaha, qaacidada afarta tallaabo ah: dareenka, xiisaha, rabitaan iyo ficil. Qodobadan waxa loo isticmaalay inay saldhig u noqdaan kumanaan olole xayaysiis ah oo isticmaala boodhka. Habkani wuxuu u baahan yahay martiqaad si loo eego iyo habka loo baaro. Tani maaha in lagu sameeyo sawiro kicinaya ama garaafyo dhalaalaya, laakiin waa inay bixiso shakhsiyad.
Boodhadhka ugu waxtarka badan ayaa badanaa ah hal-abuur, maadaama ay soo bandhigayaan dulucda mawduuca iyaga oo aan si buuxda u hadlin oo ay sheegaan waxa ay ku saabsan tahay. Sawirada, ama meel u dhow jilaha ama jaantuska muhiimka ah, ama garaaf fudud, ayaa loo isticmaali karaa in lagu dhiso goobta filimka. Marka lagu daro naqshad soo jiidasho leh, tani waxay noqon kartaa hab wax ku ool ah oo cajiib ah oo labadaba loo abuuro saameyn iyo xiiso.
Qaar badan oo ka mid ah boodhadhka casriga ah ee ugu fiican iyo kuwa hadda jira waxay isticmaalaan sawirro dhigaya daawadayaasha bartamaha goobta filimka, abuurista xiisad iyo dhiirigelin weyn. Dhiirigelinta ayaa ah in si xaaladda loo xalliyo, qofka eegaya boodhka waa inuu daawado filimka oo uu ogaado waxa dhacaya.
Boodhadhka waaweyn, gaar ahaan kuwa filimada, gaar ahaan kuwa loogu talagalay la-qabsiga, waxay adeegsadaan rafcaan laba jibaaran si ay kor ugu qaadaan shacbiyaddooda, haddii ay tahay isku darka jilitaanka wanaagsan ee caanka ah ee agaasimaha, ama majaajiliiste horay loo yaqaan oo jilayaasha caanka ah, tani si loo abuuro xidhidh taageerayaasha.
Haddi aad suuq gaynayso filim faneed ama blockbuster, had iyo jeer waxaa jira arimo la xidhiidha qaabka. Qaar ka mid ah boodhadhka aadka loo xasuusan karo waxay isticmaaleen qaabab farshaxan oo geesinimo leh, oo faa'iido u leh.
Waxa ka sooca boodhadhkan iyo kuwa ay xafiiltamaan ee aan waxtarka lahayn waa joogteynta qaabka, labadaba agabka xayeysiinta filimka iyo guud ahaan filimka laftiisa.
Iyadoo ku xiran mawduucooda, waxaa loo kala saari karaa siyaabo badan:
Boodhadhka xayeysiinta ayaa meel walba yaal waxaana loo isticmaalaa in lagu xayeysiiyo dhacdo ama badeecad cusub, sida uu qabo mareegaha maktabadda ee bilaashka ah. Inta badan waa midab waxaana la dhigaa meelaha baabuurta badan, halkaas oo si fudud loo arki karo.
Boodhadhka noocaan ah waxay sameeyaan waxa magacooda tilmaamayo, wargeliyaan ama dadka wax ka baraan. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro olole wacyigelin bulsho ama si loo badbaadiyo noocyada dabar-go'aya.
Boodhadhka mawduuca waxay ku saabsan yihiin wax kasta. Badanaa waxaa lagu iibiyaa riwaayadaha ama hawlaha fanka. Sawirka fanaaniinta ama bandhig faneedka ayaa inta badan ah mowduuca boodhadhkan, sidaas awgeed magacooda.
Boodhadhka xaqiijinta waxay ka kooban yihiin xigashooyin dhiirigelin ama dhiirigelin leh. Waxa laga yaabaa inay haystaan ​​aayado ama sawiro Kitaabka Quduuska ah oo qurux badan, oo ay la socdaan nooc ka mid ah jumlad si dadka loogu dhiirrigeliyo, loogu dhiirrigeliyo, ama loo nasiyo.
Boodhadhka borobagaandada waxay inta badan helaan rap xun sababtoo ah inta badan waxay la xiriirtaa ololeyaal siyaasadeed ama xayeysiis shirkadeed. Waxay badanaa leeyihiin calaamado waxayna matalaan qiyamka ama falsafada shirkad ama musharax siyaasadeed.
Boodhka: Dulucda Taariikhiga ah
Si aad u ogaato sida loo naqshadeeyo boodhka, waxaa lagama maarmaan ah in aan dib u socdaalno sannado badan oo aan si horudhac ah u ogaanno taariikhdeeda.
1440: markii la alifay madbacadda, waxa soo baxay shuruudihii loo baahnaa in la bilaabo soo saarista boodhadhka iyo boodhadhka si la mid ah tan aynu maanta naqaanno. warqad. Boodhka ugu horreeya ee xilliga Gutenberg Waxay asal ahaan ka timid 1477 waxaana saxiixay William Caxton. Waa boodhadh xayeysiis ah oo taxaya faa'iidooyinka ilo kulul. Sannadkii 1482 kii boodhka ugu horreeya ee sawirku wuxuu ka soo muuqday Faransiiska, gacanta Jean du Pré.
Kacaankii Warshadaha: Markii uu yimid kacaankii warshadaha iyo horumarinta magaalooyinka, waxaa soo ifbaxay baahiyo isgaarsiineed oo cusub, boodhkana wuxuu qaatay muhiimad hor leh. The lithography Laga soo bilaabo wakhtigan, waxay u ogolaatay in la abuuro midab buuxa iyo qaab weyn, oo ku habboon habka cusub ee isgaarsiinta. Farshaxan Faransiis Jules Cheret Waxa uu caan ku noqday in uu abuuro midabyo aad u ballaadhan isaga oo isticmaalaya saddex dhagax oo keliya.
Qarnigii labaatanaad: Dhaqdhaqaaqa boodhadhku waxay sii wadeen inay diiradda saaraan Paris, laakiin haweenku waxay joojiyeen inay noqdaan xarunta dareenka iyo tirooyinka kale ee la xidhiidha alaabada lagu xayeysiiyay boodhadhka ayaa bilaabay inay ka muuqdaan gacanta sawir-qaade Talyaani Leonetto capiello oo ku dayday qaabkii ay ku dhaqmi jireen kuwii isaga ka horreeyay, kuna soo af-jaray casriyaynta afka, iyadoo ay u sii dheer tahay in uu sawir-gacmeed iyo muuqaallo fidsan u adeegsan jiray astaanta shaqadiisa.
Dagaalkii Dunida I: Sannadkii 1914-kii, boodhka waxaa lagu dhejiyay adeegga baahida siyaasadeed iyo bulsho, taas oo wakhtigaas soo martay dacaayad dagaal: boorar ku dhawaaqay qorista iyo in ay sabab u tahay ka-qaybgalka dagaalka, kuwaas oo la doonayay in la ururiyo ama lagu dhawaaqo dhiirigelin ah.
Vanguards: Dagaalka ka dib, soo noolaynta farshaxanka iyo dhaqdhaqaaqa dib u cusboonaysiinta ee naqshadaynta garaafka ayaa bilaabmay. Jarmalka, dugsiga Bauhaus wuxuu tijaabiyay boodhadh ay ku qoran tahay qoraalka jileeyaha iyo sharcinimada ayaa la raadiyay ugu horreyn.The Art Deco Waxay u istaagtay isticmaalka qaababka joomatari iyo xarrago leh, kuwaas oo lagu daray wejiyada sans-serif. Mid ka mid ah jibbaarada ugu weyn wuxuu ahaa Cassandre, kaasoo yaqaanay sida loogu matalo adduunka isbeddellada faneed ee waagaas sida cubism, futurism ama surrealism.Isla mar ahaantaana, ee Midowga Soofiyeeti, constructivism ayaa caan ku noqday isticmaalka sawirada oo ay weheliso walxaha garaafyada joomatari-goyna iyo geeso xooggan. Aleksandr Rodchenko's malaha waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan ee qaabkan.
Dagaalkii Labaad ee Adduunka: Waqtigan taariikhiga ah, waxay u istaageen, Waan sameyn karnaa! Waxaa qoray J. Howard Miller iyo Isdeji oo wad oo ay abuurtay dawladda Ingiriiska 1939 iyada oo ujeedadu tahay in kor loo qaado niyadda muwaadiniinta dalka ku sugan ee khatarta ku ah duullaan soo fool leh, sidoo kale waa wakhtigan markii lithography uu bilaabay inuu fadhiisto dhabarka dambe oo daabacaaddu ay qaadatay muhiimad aad u weyn. offset.
70kii iyo maanta: Naqshadaynta boodhka ee 70-meeyadii, waxay xambaarsanaayeen xaqiiqada dhabta ah iyo farshaxanka pop-ga sida calanka. Foomamka dabiiciga ah ayaa soo noqday oo qaabku wuxuu ahaa mid xasuusin wixii la arkay wakhtiga Art nouveau. Qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha soo saaray shaqadooda ku xiran qaabkan ayaa ah, maanta, qaar ka mid ah tirooyinka ugu caansan adduunka naqshadeynta garaafka iyo boodhadhkoodu waa farshaxanno farshaxan oo dhab ah: Milton Glaser, Saul Bass ama Paul Rand. Dhab ahaantii Miguel Frago ayaa taagan.
Apps loogu talagalay abuurista boodhadhka
Qodobka ugu dambeeya ee qoraalkan, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah codsiyada ama barnaamijyada kumbuyuutarka oo aad ku samayn karto nooc kasta oo boodhadh ah. Barnaamijyadani waxay noqon karaan bilaash ama kharash bishiiba.
Xigasho: Computer Hoy
Waa qalabka ugu caansan ee la xidhiidha abuurista qalab kasta oo garaaf ah. Sidaa darteed, aad bay muhiim u tahay in la tixgeliyo. Thanks to Photoshop, waxaan samayn karnaa boodhadh iyo boodhadh nooc kasta ah, hadday yihiin kuwo aasaasi ah ama kuwo aad u faahfaahsan, maaddaama qalabka uu barnaamijku nagu soo bandhigayo ay yihiin kuwo aad u kala duwan, ballaaran oo kala duwan.
Waa la bixiyaa oo waxaad u baahan doontaa xoogaa khibrad ah barnaamijka si aad u barato oo aad si faseexa u isticmaasho. Waxaan heli karnaa nooc tijaabo ah oo dhamaan doona qiyaastii 30 maalmood laga bilaabo maalintii la isticmaalo markii ugu horeysay, laakiin markaa waa inaan iibsanaa nooca lacagta ah. Waxaan sidoo kale haysanaa ikhtiyaaro kale oo qayb ka ah isla qoyska, sida Adobe Illustrator iyo Adobe InDesign.
Microsoft Word wuxuu awood u leeyahay inuu abuuro boodhadh iyo boodhadhyo laakiin leh xaddidaadyo gaar ah xagga tafatirka sawirka. Word waxaan ku samayn karnaa boodhadhka sida ay u le'eg yihiin, ku dar sawirada asalka, garaafyada, qoraalka iyo saamaynta sawirka. Intaa waxaa dheer, waxaad heli doontaa habab boodhadh ah oo diyaar u ah soo dejinta. Ma aha oo kaliya inaan ku abuuri karno boodhadhka Word, waxaan sidoo kale ku samayn karnaa Microsoft PowerPoint iyo Microsoft Publisher. Microsoft Office waxa uu diyaar u yahay Windows oo wata nooc tijaabo ah oo hal bil ah.
Abuurista ArcSoft Daabacaadda
Waa mid ka mid ah barnaamijyada abuurista boodhadhka ee ay inta badan isticmaalaan isticmaalayaashu taas oo ay ugu wacan tahay fududaynta isticmaalka software-ka. ArcSoft waxaan haysan doonaa tiro badan oo habab ah oo horay loo sameeyay si aan uga dhigno boodhkayaga xoqan ama saldhig ku habboon ujeeddadayada.
Barnaamijku waxa uu bixiyaa habayn iyo habayn badan oo kala duwan oo lagu sameeyo boodhadhka, iyo sidoo kale habaynta dhinac kasta oo sawirada ah oo aanu ku darno boodhka. Waad ku mahadsan tahay barnaamijkan waxaan awood u yeelan doonaa inaan sameyno boorar nooc kasta ah, ha ahaato heer shakhsi ahaan sida kaadhka salaan ama heer xirfadeed sida boodhadhka xayeysiiska ama warqadaha.
Barnaamijka waxaa loo heli karaa in laga soo dejisto Windows iyo Mac qaybtiisa bilaashka ah, laakiin sidoo kale waxaa jira nooc lacag ah oo la bixiyo oo ballaarinaya astaamaha tafatirka.
GIMP waa barnaamij tafatirka bitmap weyn oo ay si weyn u adeegsadaan isticmaaleyaasha aan dooran ikhtiyaarka Photoshop, maadaama ka duwan kii hore, kani waa bilaash. Waa beddelka weyn ee barnaamijka Adobe maadaama ay ku jiraan xulashooyin tafatir oo isku mid ah, badbaadinta masaafada.
GIMP waa doorasho aad u wanaagsan haddii aan rabno in aan abuurno boodhadh annagoo adeegsan qalabyada adag ee Photoshop mana rabno inaan lacag ku bixinno. Software-kan waxaa ka go'an in uu interface fudud sameeyo si loo fududeeyo shaqeynta isticmaalayaasha dhexdooda. Barnaamijku wuxuu diyaar u yahay in lagu soo dejiyo Windows, Mac iyo Linux waana bilaash.
PosterGenius waa software abuurista boodhadh awood leh oo hufan oo ka caawin kara isticmaalayaasha inay ku abuuraan boodhadh tayo xirfad leh toban daqiiqo ama ka yar. Booster Genius wuxuu u shaqeeyaa isagoo kala saaraya waxa ku jira boodhka, taasoo u oggolaanaysa isticmaaluhu inuu diiradda saaro oo keliya natiijooyinka cilmi-baarista, halka software-ku uu si toos ah u maamuli doono inta ka hartay boostada. Intaa waxaa dheer, saaxir ku jira software-ku wuxuu kugu hagayaa dejinta boodhkaaga.
Iyadoo software-ku uu maamulo muuqaalka, meelaynta qoraalka boodhka, sawirada, miisaska, xarfaha, iyo qoraalada, saaxirku wuxuu kugu hagayaa qeexida cabbirada, nidaamka qaybaha, iyo wax ka badan. oo leh Booster Genius sida ay isu waafajiso qoraalladaada, sawiradaada, waxa ku jira, iyo sanduuqyada qoraalka keligeed.
Gudaha PostweMyWall waxaan ka heli doonnaa xulasho weyn oo ah qalab si loo abuuro boodhadhkeena oo bilaash ah. Waxaan awoodi doonaa inaan sameyno iskudhaf sawirro ah, midkeenna ama kaydinta, ku darno qoraallo iyo clipart iyo wax kasta oo aad ka fekeri karto.
Waa barnaamij aad u badan oo aad u fudud in la isticmaalo, dadaal yarna waxaan ku heli doonaa natiijooyin wanaagsan. Hoos-u-dhaca ugu weyn ee barnaamijku waa, isagoo xor ah, wuxuu ku dari doonaa calaamadda biyaha marka aan dhammeyno boodhkayaga. Intaa waxaa dheer, waxay u baahan tahay inaad iska diiwaan geliso bogga.
Waa software nashqad garaafyo xirfad leh oo aad u awood badan leh, oo inta badan loogu talagalay adeegsiga xirfadleyda. Qalabkeedu aad buu u ballaadhan yahay wuxuuna u shaqeeyaa si hufan oo degdeg ah wuxuuna daboolayaa qaybaha ugu muhiimsan sida daabacaadda desktop-ka, sawir-qaadista iyo sawir qaadista.
Waxay noqon doontaa qalab aad waxtar u leh abuurista boodhadhkayaga haddii aan rabno in la shakhsiyeeyo intii suurtagal ah. Waa bilaash in lagu soo dejiyo Windows, Mac iyo iOS.
Ronya Soft Booster
RonyaSoft Poster Designer waa barnaamij software ah oo aad u fudud in la isticmaalo kaas oo aad ku qaabayn karto oo aad ku daabacan karto boodhadhkaaga gaarka ah, calamadaha iyo calammadaada. Isticmaalayaashu waxay bilaabi karaan samaynta calamaddooda isla markaaba maadaama software-ku uu hore u lahaa noocyo badan oo calaamado diyaar u ah in la isticmaalo iyo boodhadh mar hore la dejiyay.
Mid ka mid ah sifooyinka gaarka ah ee RonyaSoft Poster Designer ayaa ah in xitaa faahfaahinta ugu yar ee boodhadhka loo habeyn karo sidaad u aragto inay ku habboon tahay. Qaar ka mid ah faahfaahinta yaryar ee aad habayn karto waxaa ka mid ah sawirro, qoraal (sida sanduuqa qoraalka, cabbirka qoraalka iyo qaabka, goobta), midabka, cabbirka, iyo qaabka.
Posterini waa kan ugu fiican abuurista boodhadhka xirfadlayaasha ah iyo buug-yaraha dhijitaalka ah ee dhacdooyinka ganacsigaaga, alaabada, wararka, iwm. Waxaa jira in ka badan 30 qaab oo loo bixiyay ujeedooyin kala duwan sida furin cusub, shir, xaflad, riwaayad, iyo xaflad.
Marka aad doorato qaab-dhismeedka, waxa lagu jihaynayaa bogga habaynta, halkaas oo aad ku dari karto qoraal iyo sawiro, beddesho cabbirka, geliso qaababka, iyo in ka badan.
Haddii aad meeshan timid, waxaad xaqiijin doontaa si aad u bilowdo naqshadaynta inaad u baahan tahay dhiirigelin. Waxyaabaha lagu soo daray ayaa sidoo kale muhiim ah, maadaama ay yihiin saldhigga taageeraya boodhka wanaagsan, waxayna sameeyaan labadaba isbeddellada farshaxanka iyo qaybaha curiyeyaasha si sax ah u midoobaan.
Waxa kale oo aad awoodi doontaa inaad aragto in naqshadaynta boodhadhka ama boodhadhku ay ku jiraan meel aan wada gaadhi karno dhammaanteen. Waxaa lagama maarmaan ah in fariintu ay gaarto dhammaan isticmaalayaasha aan la hadlayno, iyo in ka sarreeya dhammaan in lagu ciyaaro walxaha garaafyada labaad (midabada, xarfaha, qaababka aan la taaban karin, qaababka joomatari ee fudud iyo kuwa caadiga ah, iwm.)
Waxaa la gaaray waqtigii aad bilaabi lahayd naqshadeynta, kaas oo noqon doona boodhadhkaaga ugu horreeya.
Horay ma u bilowday?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo sameeyo boodhadhka
Talaabooyinka lagu abuurayo CV soo jiidasho leh